အမဲမိုးခိုသား ၁၅ ကျပ်သား
ရေကညွှတ် ၁၀ ချောင်း
ဘူလ်ဂိုဂီ အရသာဆော့စ် ၃ စွန်း
သံပုရာရည် ၁ လ္ဘက်စွန်း
ဂျပန်သခွားသီး ၀.၅ လုံး
မုန်လာဥနီ ၀.၅ လုံး
နှမ်းအချဉ်ဆော့စ် ၁ စွန်း
၁ ။ အမဲ မိုးခိုသား ကို ပါးပါးလှီးရျွ် ထုပြားပြီး သံပုရာရည် ၊ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်း မှုန့် ၊ ဘူလ်ဂိုဂီ အရသာ ဆော့စ် တို့ နှင့် အရသာသွင်းထားပါ။
၂ ။ ရေကညွှတ် ကို အခွံနွှာရျွ် အရင့်ပိုင်းများ ဖယ်ထုတ်ပြီး အသင့်အရသာသွင်းထားသော အမဲမိုးခိုသားပြား နှင့် လိတ်ထားပါ။
၃ ။ မုန်လာဥနီ ၊ ဂျပန်သခွားသီး ၊ ငရုပ်ပွဝါ ၊ ငရုပ်ပွစိမ်း ၊ ကြက်သွန်နီ တို့ ကို အမျှင်လှီးရျွ် ရေခဲရေစိမ်ထားပြီး ခရမ်းချဉ်သီး ကို လည်း အစေ့ထုတ်ရျွ် အမျှင်လှီးထားပါ။
၄ ။ ဒယ်အိုး ကို အပူပေးပြီး သံလွင်ဆီ ၁ လ္ဘက်စွန်းခန့် နှင့် အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော အမဲကညွှတ်လိတ် ကို အိုးကပ်ကင်ရျွ် အနည်းငယ် ကျက်လျှင် ဘူလ်ဂိုဂီ အရသာ ဆော့စ် ထည့်ချက်ပေးပြီး ကျက်အောင်ချက်ထားပါ။
၅ ။ အသင့် ရေခဲရေစိမ် ထားသော သီးရွက်စုံများ ကို သန့် စင်ထားသော ဆလပ်ရွက်ပေါ် တင်ရျွ် နှမ်းအချဉ်ဆော့စ် ဆမ်းပြီး အသင့် ချက်ထားသော အမဲကညွှတ်လိတ် ကို သံလွင်ဆီ ၁ လ္ဘက်စွန်း ၊ ဘူလ်ဂိုဂီ အရသာ ဆော့စ် တို့ နှင့် အတူ ပင်စိမ်းရွက် ၊ သံပုရာသီး တို့ ဖြင့် အလှဆင်တည်ခင်းပါ။
Beef Tenderloin 240 g
Asparagus 10 numbers
Beef Bulgogi Sauce3tbsp
Japanese Cucumber ½ number
Sesame Dressing ( Kewpie ) 1 tbsp
Basil Leavesalittle
Sliced the Beef Tenderloin and flattened then Marinate with Lime Juice, Salt, Crushed Black Pepper, Beef Bulgogi Sauce and put aside.
Peeled the Asparagus and remove the hard part, then roll with marinated sliced Beef Tenderloin to pan grill.
Julianne the Carrot, Japanese Cucumber, Yellow Bell Pepper, Green Bell Pepper, Onion and soak in iced water then Julianne Tomato and put aside.
Heat up the pan over medium heat and pan grill the Asparagus in Beef Roll with 1 tsp of Olive Oil until flavor and tender, then add in some more Beef Bulgogi Sauce and cook forawhile.
Place the Julianne Salad on the bed of Lettuce and dressing with some Sesame Dressing, then serve with pan grill Asparagus in Beef Roll in Bulgogi Sauce and 1 tsp of Olive Oil and garnish with some Basil Leaves and Lime wedges.